Zvemagariro Media imugodhi weGoridhe weInishuwarenzi Kushambadzira Martech Zone
Social Media imugodhi weGoridhe weKushambadzira Inishuwarenzi
Svondo, Kurume 30, 2014 Muvhuro, March 31, 2014 Douglas Karr
At Yemagariro Media Kushambadzira Nyika gore rino, kudzoka kwekudyara kwaive shinda yakajairika mukati memazhinji ezvikamu uye hurukuro kumusangano. LeadSift ipuratifomu inogonesa kugarisana nekutengesa nekuteerera uye nekuendesa zvingangotungamira kumakambani. Mumuenzaniso uyu, LeadSift yakaunganidza ruzivo kubva kune anopfuura mamirioni e3.7 tweets uye nhevedzano yezvidzidzo zvekutsvagisa kuratidza kugona kwekutengesa munharaunda mukati meindasitiri yeinishuwarenzi.
Chimwe chezvinhu zvine simba kwazvo pasocial media ndeye akateedzana ezve maitiro uye mapatani anogadzirwa kubva kune hombe data. Kubata kwese, ma tweets ese nekubatana kwese kuri kusanganisa kugadzira izvo zvatino tarisa sedata hombe. Kuburikidza nekunyatsoongorora LeadSift yakafumura mafambiro mune data iro makambani einishuwarenzi anogona kuwedzera kuti ave anoshanda uye anoshanda mukushambadzira kwavo nekutengesa kwekuedza
Tags: aflacallstateavivageicoinishuwarenzi kushambadzirametlifemunyika yosebudiriroevanhu vezvenhaupurazi rehurumendeemwavehupenyu hwezuva hwemari